Ithegi: visa | Martech Zone
NgoMvulo, Juni 15, 2015 NgoMvulo, Juni 15, 2015 Douglas Karr
Ngelixa ndikwi-IRCE, kuye kwafuneka ndihlale phantsi ne-Intuit's SVP yeeNtlawulo kunye neZisombululo zezoRhwebo, uEric Dunn. Yayiyimbonakalo evula amehlo ekukhuleni kwe-Intuit kwintengiso yentengiso kunye ne-ecommerce. Ngapha koko, uninzi lwabantu aluqapheli kodwa imali eninzi ihamba nge-Intuit kunePayPal xa isiza kurhwebo lwe-Intanethi (ukuba ubandakanya iinkonzo zabo zokurhola). I-Intuit iyaqhubeka nokuzama ukuba sisisombululo sokuphela kwayo nayiphi na i-ecommerce okanye ishishini lokuthengisa apho
NgoLwesithathu, Meyi 20, 2015 NgoLwesibini, Meyi 19, 2015 Douglas Karr
Ukungena ngemvume okungatshatanga kuye kwangqinwa kusebenza kuyo yonke ibhodi- nokuba kukusebenzisa ukungena kwezentlalo ukugcwalisa iifom zamaphepha okufika, okanye ngoku ngokusebenzisa ubuchwephesha bokuhlawula ukuguqula ngokukhawuleza umthengi. IVisa ibonelela ngophawu olunye kwinkqubo ebizwa iVisa Checkout esele yamkelwe ngokubanzi. Ngokukhula ngokukhawuleza kwiinyanga ezili-10 ezidlulileyo, ukuphuma kweVisa kubonise ukwamkelwa okubalulekileyo kunye namazinga encoko. Baza kube bekhaba intengiso enkulu yentengiso kunye nemikhankaso yentengiso kweli hlobo. Ukuthi ga,
Ii-Smartcards zikhutshwa kule minyaka imbalwa izayo
NgoLwesibini, Aprili 15, 2014 NgoMvulo, Aprili 14, 2014 Douglas Karr
Wow… xa ucinga ngazo zonke izixhobo ezinikezelweyo nezixhomekeke kumakhadi etyala emagneti enemigca, leyo yitoni yezixhobo kunye neendleko phaya zokutshintsha. Kule minyaka imbalwa izayo, nangona kunjalo, yile nto kanye eza kwenzeka! Amakhadi etyala emveli aphuma. Kuthathe ukubhuqwa kwamakhadi etyala ayi-70 yezigidi ngexesha leholide ka-2013 ukukhuthaza iCongress ukuba iyeke amakhadi emigca angakhuselekanga asetyenziswa